FIZARANA 6: Fr. Michel Rodrigue - Matio 24 ao amin'ny Baiboly miresaka ny amin'ny fotoantsika - Countdown to the Kingdom
Fizarana 6 amin'ny "famerenana amin'ny laoniny" miaraka amin'i FR. RICHRIGUE MICHEL
Fr. Michel Rodrigue	mizara ny dikan'ireo andinin-tsoratra masina sasany ao amin'ny Filazantsaran'i Matio, faha-24, satria misy amin'ny fotoantsika ankehitriny.
Matio: 24: 1-2:
Niala tao amin'ny tempoly i Jesosy ary lasa nandeha, rehefa nanatona azy ny mpianatra mba hanondro ny tranon'ny tempoly. Ary hoy Izy taminy: Hitanareo ve izany rehetra izany? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy havela hisy vato hifanongoa eto tsy horavana. "
Marika io satria efa nanterahan'i Jesosy mialoha, tsy ho an'ny Tempolin'i Isiraely ihany, fa ho an'ny tempolin'ny tenany ihany koa. Handalo ny zava-miafina izay nolalovan'i Kristy ny Fiangonana. Midika izany fa hohomboana ny hazo fijaliana, ary efa miditra amin'ny Andro fanomboana antsika isika izao. Hatsipy ao am-pasana ny Fiangonana. Tsy hanan-teny holazaina intsony amin'ireo firenena izy. Tsy hino izany izy. Tsy hisy handre izay lazainy. Hanary ny Teny ho azony ireo firenena.
Ny vato dia maneho ny fotopampianaran'ny Fiangonana. Ny vato ao amin'ny Fiangonana dia "hatsipy" amin'ny faran'ny taona. Sambany mantsy no hanafika ny fotopampianaran'ny fiangonana. Ho torotoro ny sakramenta. Rehefa tsy mino intsony ny sakramenta ny olona, ​​rehefa mahatsapa ny tsy tokony hivavaka, ny olona hivavaka amin'i Jesosy dia ho famantarana izany.
Manomboka ny famantarana izany. Rehefa mijery manodidina ianao dia mahita fotopampianarana diso miparitaka any amin'ny toerana maro: ao amin'ny seminera, any amin'ny oniversite, ny fianakaviantsika, amin'ny haino aman-jery, amin'ny karazana karazana sandoka rehetra. Efa mitranga eto amin'izao tontolo izao izany.
Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva Izy, dia nanatona azy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe: Lazao aminay hoe rahoviana no ho tonga izany, ary inona no ho famantarana ny fihavianao sy ny faran'ny andro?
Niresaka izany i Jesosy rehefa nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva, ilay tendrombohitra niaretany. Nipetraka niaraka tamin'ny mpianatra izay nanatona Azy izy, ary nanontany hoe: "Inona no famantarana ny ho avy sy ny fahataperan'izao tontolo izao?" Ny fanontaniana dia midika fa i Jesosy dia niresaka tamin'ny mpianany momba ny Tempoly, ary momba ny fiafaran'ny fotoana manahirana [ny fahantrana], ary ny fiafaran'ny fahaterahana. Ny fanontanian'izy ireo dia mampiseho izany. Nandalo haingana ireo teny ireo isika nandritra ny Lamesa, ary tsy te hiresaka momba izany izahay satria tsy te handray ilay hafatra ny olona. Matahotra izy ireo.
Nanontany ny mpianatra hoe: "Lazao aminay, rahoviana no hitranga ary inona no famantarana ny ho avy sy ny fahataperan'ny taona?" Fantatr'izy ireo fa handao azy ireo izy ireo ary mametraka fanontaniana telo izy ireo:
Ilay voalohany: Rahoviana no hitranga?
Ny faharoa: Famantarana inona no ho famantarana ny fahatongavanao?
Ny fahatelo: Inona no famantarana ho famantarana ny fiafaran'ny taona?
Ny famantarana voalohany ny fiaviany dia ny fisehoan'i Jesosy amin'ny ho avy lehibe, ka tsy hisy handositra azy io - io dia ny fahazavan-tsaina momba ny feon'ny fieritreretana. Faharoa, ho avy Izy amin'ny faran'izao tontolo izao. Ny zavatra mitovy amin'izany ihany no namakiako ny filazan'i Maria Valtorta momba ny fotoanan'ny farany. Voafehin'izany aho. [Rahalahy Philip tao amin'ny fraternity, dia naneho an'i Fr. Michel misy andalana avy amin'ilay boky. Ity angamba ity andalan-teny izay nolazain'i Jesosy ity:
“Mety ny hamerimberina aminao hoe: 'Nangataka ny hanafaka anao i Satana.' Ary ny fanamafisana dia manaporofo fa ny kolikoly dia tamin'ny fotoanan'ny tondra-drano izany, niharatsy noho ny fanananao an'i Kristy sy ny Fiangonany, fa tamin'ny andron'i Noa dia tsy izy ireo. ”
Iray amin'ireo karazan'olona voalohany tamin'ny olombelona izany, izay efa akaiky ny ora farany, mba hampisarahana ny fijinjana ny olom-boafidy avy amin'ny fijinjana ny didy. Mampalahelo fa kely ny fijinjana ny olom-boafidy raha oharina amin'ny hafa. ”] -Ny fotoana farany nambara tamin'i Maria Valtorta, Editions Paulines, p. 8.
Matio 24: 4-5:
Dia hoy i Jesoa namaly azy ireo: «Tandremo mba tsy hisy hamitaka anareo. Fa maro no ho avy amin'ny anarako hanao hoe: 'Izaho no Mesia', ary maro no hamitaka azy ireo.
Efa manomboka izany izao. Hitanao fa misy milaza fa izy no ilay Mesia vaovao. Hitanao ato amin'ny Internet mora foana izany. Manana iray ao Montréal izahay. Dia nanatona ahy izy ka nanao hoe: "Izaho no Jesosy."
Hoy aho hoe, "Tsia, ianao dia tsy mijery ny fitsanganana amin'ny maty loatra." [Fr. Nihomehy i Michel.] Arakaraka ny maha-adala anao dia ny mpanaraka anao bebe kokoa. Hizaka olona maro izy ireo. Somary diso fanantenana ny olona ankehitriny ka mitady zavatra ivelan'ny dia mahazatra mahazatra azy ireo. [Tsindrio eto raha hijery lehilahy milaza fa video i Jesosy.]
Handre ady sy filazana ady ianao; tandremo sao taitra ianao, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany.
Zava-dehibe izany. Tadidio fa mbola tsy tonga ihany ny farany. Fanadiovana izao tontolo izao fa tsy hifarana azy io.
Hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana; hisy mosary sy horohorontany amin'ny toerana rehetra. Ireo rehetra ireo no fiandohan'ny fanaintainan'ny asa. Dia hatolony amin'ny fanenjehana ianao, ary hovonoiny izy ireo. Halan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako.
Ity no hitranga. Ny sasany amintsika ho maritiora. Tsy te hisaron-tava aho amin'izany. Maro aminareo no hialokaloka. Ny sasany efa manana ny lakroa tamin'ny maritiora eo amin'ny handriny. Afaka manome toky anao momba izany aho. Eny, ny sasany ho maritiora, nefa rehefa fantatsika fa maritiora dia mahafaly antsika izany. Hainao, tsy hahatsapa na inona na inona ianao! Hanenjika anao izy ireo, ary sarotra izany, fa rehefa tonga ny fotoana hamoahana maritiora dia fahasoavana izany. Io fahasoavana io dia ahafahanao mitory ny Tompo ary afaka mahatoky amin'ny fomba fifaliana satria sitrak'i Jehovah ho anao amin'ny fotoana maritiora. Fahasoavana lehibe izany. Nidera mafy an’Andriamanitra tamin’i Md Polycarp ny tenany rehefa maty nanambara ny finoana izy. [Tsindrio eto raha hamaky bebe kokoa momba ireo fotoana farany niainany.]
Ary avy eo ho maro no hitarika ho amin'ny ota; dia hamadika izy ireo ary mifankahala. Maro ny mpaminany sandoka hitsangana ka hamitaka ny maro; ary noho ny fitomboan'ireo mpanao ratsy dia mihamangatsiaka ny fitiavan'ny maro.
Noho ny fitomboan'ny tsy fanarahan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavana. Ny fiheverana ny hafa, ny amin'ny ankizy madinika, ny sahirana, ny olona tsy feno toy ny sarin'ny “lavorary” lehilahy sy vehivavy — izay manana kilema sy kilema, tsy mila azy ireo intsony isika. Manana ny teknolojia rehetra isika hamonoana azy, hanafoanana azy ireo. Lasa maizina ny lalàna ary famantarana ny satana ny hatsiaka. Mandoro any Satana i Sehena ary mafana ny afobe. Nefa rehefa eto an-tany izy no aleony ny hatsiaka. [Izany no antony] rehefa tonga ny devoly, mahatsapa ny hatsiaka amin'ny haizina ianao.
Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary hotorina manerana an'izao tontolo izao ity filazantsaran'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.
Ny Firenena Mikambana dia mampiseho ny ankamaroan'ny firenena rehetra - St. Nandeha tany ny Papa Paul VI II, dia tonga tao i St. Papa John Paul II, tao i Pope Francis - ary miaraka amin'ny Internet, ny vaovaon'i Jesosy Kristy dia hatraiza hatraiza. Tsy vitan'ny devoly fotsiny ny Internet. Izy io dia fiara ihany koa ho an'ny asan'ny Fiangonana.
Rehefa mahita ny fahavetavetana mahatsiravina nolazain'i Daniela mpaminany mijoro ao amin'ny fitoerana masina ianao (avelao ny mpamaky hahalala). . .
Inona no tian'i Jesosy holazaina? Masindahy Papa Paul VI nilaza fa "tamin'ny alàlan'ny famotehana sasany, ny setrok'i Satana dia niditra tao amin'ny Fiangonana." Nandalo haingana ny teny hoe "tamin'ny alàlan'ny famoretana" ny olona sasany. Midika hoe hierarchy ny Fiangonana izy ireo. [Tsindrio eto raha hamaky ny tena hevitry ny papa, araka ny nambara vao tamin'ny taona 2018.]
Ny anti-Kristy dia ao amin'ny ambaratongan'ny Fiangonana izao. Hatramin'ny nanombohan'ny Fiangonana dia ny fipetrahany lehibe dia ny hipetraka amin'ny seza an'i Peter. Ny devoly dia hifaly mandritra ny fotoana iray. Ny anti-Kristy no hiseho sy manjaka amin'ny maha-mpamonjy an'izao tontolo izao. Hanana loha telo izy: loham-pinoana iray - pope diso, loha politika, ary loha ara-bola. Ny anti-Kristy, amin'ny sarin'ny mpamonjy, dia izy no lohan'ny roa hafa. Efa ao daholo ankehitriny. Fotoam-potoana sisa io. . .
Aorian'ny fipoahan'ny anti-Kristy dia ho tonga ny sakramenta. Handoto ny Eokaristia Masina izy ireo ary milaza fa tandindona fotsiny izany. Hiezaka hanao karazana Lamesa hafa ry zareo mba hampifaliana ireo fiangonana rehetra, ary hanafoana ny Andron'ny Tompo izy ireo, ny alahady. Ny pretra dia ho toy ny shamans. Diakona ho mpisorona sy diakona manambady dia tsy hitovy amin'ny an'ny taloha. Izy ireo dia ho "maitso" ary hifantoka amin'ny Mother Earth. Ny fandavana telo nataon'i Petera dia hitranga indray. Amin'ity indray mitoraka ity dia fandavana ny tena fisehoana marina ao amin'ny Eokaristia, fandavana ny fisoronana, fandavana ny fanambadiana izy ireo.
. . . Ary izay any Jodia dia tsy maintsy handositra ho any an-tendrombohitra; ary izay ao an-tampon-trano dia tsy hidina haka ny ao an-tranony; ary izay any an-tsaha tsy mahazo miverina haka ny lambany. Lozan'ny bevohoka sy ny reny mitaiza tamin'izany andro izany.
Rehefa tonga ny trano fialofana, dia araho ny lelafo eo alohanao. Aza miherika. Araho ny lelafo. IZY. Aza manahy momba ny zanakao lahy, zanakao vavy, ny fianakavianao. Izay rehetra voamariky ny hazo fijaliana dia hanana lelafo, hanana anjely. Rehefa mitodika ny lasa ianao dia tsy matoky azy kokoa. Tsy ho mampanahy anao ny hisintona ny olona manodidina anao intsony. Ny orinasanao dia ny fanarahana ny lelafon'ilay anjely izay hitari-dàlana anao ho any amin'ny toeram-pialofana, na iza no hitari-dalana anao manodidina ny tranonao mba ilazana fa ny tranonao no fialokalanao farany.
Mivavaha mba tsy ho amin'ny ririnina na amin'ny Sabata no handosiranareo; fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe, izay tsy mbola nisy toa azy hatrizay niandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, ary tsy hisy tahaka izany intsony.
Midika izany fa tsy maintsy mivavaka ianao mba ho vonona satria raha tsy vonona ianao dia tsy hahazo ny momba anao ary hisy ny fijaliana.
Raha misy manao aminareo hoe: 'Inty ny Mesia!' na: 'Ao izy!' aza mino. Hitsangana ny mesia sandoka sy ny mpaminany sandoka, ary hanao famantarana sy fahagagana lehibe be ry zareo mba hamitahana, raha azo atao, na ny olom-boafidy aza.
Zava-dehibe izany. Raha misy olona manao aminao hoe: «Inty izy»! aza mino. Hiseho i Satana ary hamorona famantarana sy fambara lehibe hamitahana, raha azo atao, na dia ireo olom-boafidy aza. Afaka manao famantarana lehibe ny demonia. Afaka manangana olona iray amin'ny tany izy. Rehefa manao exorizitise dia hitako matetika izany. Tsy mety amiko na iza na iza, lesion. Azony atao ny maka ohatra ny stigmata. Afaka manahaka ny fomba fijerin'i Maria Virjiny izy. Ny "fisehoana" telo ambin'ny folo hafa dia nitranga tamin'ny fotoana nipoiran'ny Our Lady's Fatima, ary voatery namantatra azy ireo ny Fiangonana.
Rehefa manahaka an’Andriamanitra ny devoly, dia tsy hisy zavatra tsara tarehy. Tsy vitany ny hahatanteraka ny zavatra rehetra. Afaka mamono sy manao ny fandehanana maty izy satria soloany ny aina. Saingy tsy afaka manao izany mihoatra ny roa andro izy satria manomboka mamofona ny vatana! Tsarovy izay nolazaiko. Ny devoly dia tsy manam-pahefana mamorona. Tsy manana fahefana hamorona indray izy. Noho izany dia afaka mandeha amin'ny vatana mangatsiaka fotsiny izy mba ho tratrany fotoana fohy. Ny olona manana ny devoly dia manao zavatra tahaka izao. Noho izany, eny, manandrana manahaka an'i Jesosy izy amin'ny fanaovana karazana famantarana isan-karazany. Ho fantatrao fa tsy avy amin'ny Tompo ireo zavatra ireo satria tsy ho ela ny vokatra. Ho fohy foana io.
Ary zava-dehibe izany: hahita zavatra maro amin'ny fahitalavitra ianao. Ny zavatra voalohany izay tian'ny devoly dia tokony aseho amin'ny seho. Niavonavona izy, ka hanome famantarana izy ka mahatonga ny olona hilaza hoe: «Efa hitanao ve izany! Hitanao ve izany! ” Aza mijery ary mamahan-tena ny avonavony. Iray amin'ireo anjely tsara tarehy indrindra any an-danitra izy. Nahazo ny fanomezana lehibe indrindra nomen'ny Ray ny anjely izy. Nampiasa ireny fanomezana ireny izy hanodinkodina sy handringana anjely hafa miaraka aminy. Ny ampahatelony dia nanaraka azy tany amin'ny afobe.
Indro, efa voalazako taminareo tany aloha. Ka raha hoy izy ireo aminao: 'Tany an-efitra Izy,' aza miala any; raha hoy izy ireo: Ao amin'ny efi-trano anatiny izy, aza mino. Fa tahaka ny helatra avy any atsinanana ary hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fihavian'ny Zanak'olona.
Nandritra ny telo taona sy tapany eo ho eo (fantatro fa hohafohezina i Jesosy tamin'ity indray mitoraka ity noho ny fanelanelanan'ny reniny) ny olona dia hialokaloka. Avy eo dia ho avy ny andro telo ao amin'ny maizina ary arahin'i Era izay be fiadanana izay hahatsapana an'i Jesosy ao am-pon'ny olombelona rehetra.
Hanohy ny lahatsoratra manaraka amin'ny "fisintomana virtoaly" miaraka amin'i Fr. Michel, kitiho eo FIZARANA 7: Fr. Michel Rodrigue - Ny soratra apokaliptika an'ny Advento dia manampy amin'ny fanazavana ny zavatra ho avy.
Posted in Fr. Michel Rodrigue, Soratra Masina, Ny fotoan'ny fahoriana.
← FIZARANA 7: Fr. Michel Rodrigue…
FIZARANA 5: Fr. Michel Rodrigue… →